ပြင်သစ်နှင့် အီတလီနိုင်ငံတို့ ရွှေ့ပြောင်း ခိုလှုံသူများအရေး ပူးတွဲဆောင်ရွက်မည်ဟု မက်ခရွန်? - Yangon Media Group
ပဲရစ်၊ ဇွန် ၁၆
ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့သည် ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံသူများအရေးကိစ္စကို အတူပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ပြင်သစ်သမ္မတ အီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်က ဇွန် ၁၆ ရက်က အီတလီအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဂျိုးဇက်ကောင့်နှင့်ပူးတွဲပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
”ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံနယ်စပ်အရေးကိုလည်း နှစ်နိုင်ငံတိုင်ပင်ပြီး ဖြေရှင်းသွားမှာပါ။ အတူတူလက်ချင်းတွဲလို့ပေါ့”ဟုလည်း ဆက်လက်ပြောကြားလိုက်သည်။ ”ဥရောပနိုင်ငံများအကြား မြဲမြံသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ ဥရောပကမ်းခြေစောင့်တပ်များနဲ့ နယ် ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ အင်အားတောင့်တင်းအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဥရောပရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံသူများ နေ့စဉ်ဆိုသလို အမြောက်အမြား ခိုလှုံရောက်ရှိနေကြသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အတွင်းက လူမှုရေးအဖွဲ့ဖြစ်သော SOS Mediterrane မှ ကယ်ဆယ်သူများနှင့် ခိုလှုံဒုက္ခသည် ၆၂၉ ဦး ကို သင်္ဘောဖြင့်ဆယ်ယူကယ်တင်ခဲ့သော Aquarius အဖွဲ့များမှ ကယ်ဆယ်ခဲ့သူများကို အီတလီနိုင်ငံဆိပ်ကမ်းသို့ဝင်ရန် လက်မခံခဲ့ချေ။ ဇွန် ၁၁ ရက်က စပိန်နိုင်ငံ ဗလင်ဆီယာဆိပ်ကမ်းသို့ဆိုက်ကပ်လာသော ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံသူများတင်ဆောင်လာသင်္ဘောအား စပိန်အစိုးရသည် ခွင့်မပြုချင်ပြုချင်ဖြင့် နောက်ဆုံးလူမှုရေးစိတ်ဓာတ်အရဆိုက်ကပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ ဆာဟာရသဲကန္တာရမှလာသော အာဖရိကရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံသူများ ဖြစ်ကြပြီး လစ်ဗျားကမ်းခြေစောင့် တပ်ကကယ်ဆယ်ခဲ့ရသူများဖြစ်ကြသည်။
ဆီးရီးယား စစ်သွေးကြွတစ်ဦးကို မော်စကိုတွင် ဖမ်းမိ
ကုန်စည်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန် အချိန်ကာလအားဖြင့် အခက်အခဲရှိသူများကို အထ?
ပြည်တွင်းပတ်လည်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးပွဲစဉ် နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပမည်